Mpaghara nke Colombia, ngalaba ha na isi obodo ha | Njem zuru oke
Colombia bụ mba nke anọ n'ihe gbasara mgbatị na Latin AmericaIji nye gị echiche, n'ime mpaghara mpaghara ya enwere spain abụọ yana n'ihi nnukwu mgbatị ya, enwere ọtụtụ mpaghara Colombia nke ọdịiche dị iche.
Mba ahụ gafere ugwu ugwu Andes na ndagwurugwu Amazon, ọ bụkwa nanị ya bụ mba ndị dị na South America nwere ụsọ oké osimiri ndị dị n’Oké Osimiri Atlantic na Pacific. N’etughi ogha n’iru, anyi ga-amatakwu banyere mpaghara nke Colombia na ihe ndi ha bu.
1 Mpaghara 5 nke Colombia
2 Mpaghara Andean, ma ọ bụ triangle ọla edo
3 Mpaghara Caribbean, ebe mara mma kachasị mma
4 Ndị Pacific, nnukwu ụdị dị iche iche
5 La Orinoquía, ebe mmiri na-enweghị njedebe
6 Amazon, oke ohia nwere oke mmasi
7 Kèala amaala n'ime ngalaba
8 Ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ngalaba
Mpaghara 5 nke Colombia
Isi mpaghara ise dị na Colombia nwa:
A na-ahazi mpaghara nke Colombia na ngalaba dị iche iche na ngalaba, nke kewara ya na obodo, nke nwekwara isi obodo. Na mkpokọta enwere ngalaba 32, nke mejupụtara Colombia. M na-enye gị nkọwa ole na ole gbasara mpaghara mpaghara ndị a na ngalaba ha.
Mpaghara Andean, ma ọ bụ triangle ọla edo
Olee otú ị pụrụ isi were ya na ugwu Andes na-achịkwa ugwu ugwu, ọ bụ ndị mmadụ bi na mba ahụ, n'ime ya bụkwa obodo ndị kachasị mkpa.: Bogotá, Medellín na Cali, ya mere amaara ya dị ka triangle ọla edo. Ọ bụkwa mpaghara nke nnukwu ogige ntụrụndụ mba nke mba ahụ.
Aga m edepụta ngalaba nke mpaghara a yana isi obodo ha na nne na nna:
Antioquia (Medellín, obodo nke ndu ebighi ebi)
Boyacá (Tunja), Caldas (Manizales, na etiti mpaghara kọfị)
Cundinamarca (Bogotá, isi obodo nke obodo)
North nke Santander (Cúcuta, ókè-ala na Venezuela)
Mpaghara Caribbean, ebe mara mma kachasị mma
Mpaghara ugwu ugwu nke Colombia bụ nke Oké Osimiri Caribbean na-asa, na ya bụ ụfọdụ n'ime osimiri ndị a ma ama na-acha ọcha ájá, na nke ha na-ekwu bụ obodo kachasị mma nke niile: Cartagena de Indias, UNESCO n'onwe ya na-akọwa ya dị ka obodo kachasị mma na Latin America ... Agaghị m abụ onye ga-ekwu ma ọ bụghị. Na mpaghara a, anyị nwekwara ike ịchọta nchịkọta agwaetiti nke San Andrés na Providencia. N'ụzọ dị ịtụnanya, ị nwekwara ike ịga na Sierra Nevada de Santa Marta, ugwu ugwu dị n'ụsọ osimiri kachasị elu n'ụwa nwere njirimara colombian enyemaka.
Site na otu akara ahụ, m na-akọwapụta ngalaba ndị mejupụtara mpaghara Caribbean na isi obodo ha:
Bolívar (Cartagena nke Indias)
San Andrés, Providencia na Santa Catalina (San Andrés)
Ndị Pacific, nnukwu ụdị dị iche iche
Osimiri Colombia bụ otu n'ime ógbè Colombia nke na-enye ndị kachasị iche n'ụwa, nke nwere otu ụdị kachasị elu nke ụdị kwa square mita. Mpaghara ahụ bụ ebe obibi nke ogige ntụrụndụ asaa, ebe nchekwa osisi na ahịhịa na anụmanụ, na Malpelo Island, ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, enwere anya azụ whale, n'etiti July na Nọvemba, ị nwere ike ịtụgharị uche na ha. Imirikiti ụmụ agbụrụ Afro Colombia biri na mpaghara ya.
Ngalaba nke Pacific Region bụ:
Ndagwurugwu Cauca (Cali)
Distance Arochukwu-Nariño (Pasto)
La Orinoquía, ebe mmiri na-enweghị njedebe
Orinoquía bu uzo di na odida anyanwu, o noo na Osimiri Orinoco. Ọ bụ na mpaghara a ebe kilomita nke Colombia bụ, obodo ala ya, na Puerto López. Na Sierra de la Macarena ị ga-ahụ Caño Cristales, nke ha na-akpọ osimiri nke chi ma ọ bụ nke agba ise, n'ihi na ekele maka ahịhịa mmiri dị n'ime ya nwere mpaghara nke agba dị iche iche, nke na-ewepụta mmetụta nke ịnọ n'ihu agbaze agbaze.
Ngalaba nke mpaghara a bụ:
Mgbaru ọsọ (Villavicencio)
Amazon, oke ohia nwere oke mmasi
N'ikpeazụ, a ga-enwe ngalaba nke mpaghara Amazon, nke bụ ọdịnala:
Mana ụfọdụ okpuru ọchịchị na ngalaba nke Nariño, Cauca, Meta na Vichada na-atụle, nke na-achịkwa mpaghara Orioquía.
Mpaghara a, nke kachasị ibu na mpaghara mba, ebe ọ banyere ọhịa Amazon, bụ mpaghara pere mpe karịa, ikekwe n'ihi na ọ bụ oke ọhịa. N’ụzọ dị mwute, imirikiti ọrụ akụ na ụba taa na-eme na Amazon anaghị ejigide nkwekọ na odida obodo ma ọ bụ ụmụ amaala ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Colombia dị iche iche nke ukwuu, ma cheta na ọ bụ mba nwere agbụrụ dị iche iche nwere ụmụ amaala iri asatọ na anọ a ma ama, asụsụ obodo iri isii, yana ụmụ agbụrụ Afro na, ebe ha pere mpe, karịrị 84% nke ọnụ ọgụgụ niile.
Kèala amaala n'ime ngalaba
Agwara m gị na ndị a bụ mpaghara Colombia, yana ngalaba na isi ha, enwekwara a nkwanye ugwu maka ókèala ụmụ amaala ebe ọ bụ na 1991 Constitution.
Indkèala amaala ndị a dị na Colombia kere site na nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti gọọmentị na ụmụ amaala obodo. Ọ bụrụ na ndị a gbasaa ihe karịrị otu ngalaba ma ọ bụ otu ọchịchị, ndị ọchịchị ime obodo ga na-elekọta ha ọnụ na kansụl nke ụmụ amaala. Na mgbakwunye, ókèala amaala a nwere ike ịghọ mpaghara mpaghara ma ọ bụrụ na ha emezu ihe ụfọdụ achọrọ. Mpaghara ụmụ amaala na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hekta 31.000, ma a na-ahụkarị ya na ngalaba nke Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare na Vaupés.
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ngalaba
N'ịga n'ihu na nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara Colombia, ọ dị mma ka ị mara nke ahụ ngalaba ọ bụla nwere nzukọ ngalaba, nke dị n'etiti ndị nnọchi anya iri na otu na iri ise, ndị ahọpụtara na ntuli aka kwa afọ 11 ọ bụla, nwere ọchịchị kwụụrụ onwe ya na mmefu ego nke ya. A na-ahọta onye gọvanọ ma ọ bụ gọvanọ onye kwuo uche ya ozugbo, ndị Colombia niile karịrị afọ 50, bi na ngalaba ahụ, ọbụlagodi na a mụrụ ha na onye ọzọ, nwere kaadị amaala na nzere nwere ike ịtụ vootu. Gọvanọ enweghị ike iguzobe ntuli aka.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịkwado onwe gị na map ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ala nke Colombia, mba mara mma dị ka ọ dị iche na nke anyị nwere olileanya na anyị akụziworo gị ọtụtụ ihe banyere Mpaghara nke Colombia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Mpaghara nke Colombia